Urur taabacsan Daacish ayaa looga dhawaaqay Bariga Africa | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Urur taabacsan Daacish ayaa looga dhawaaqay Bariga Africa
Urur taabacsan Daacish ayaa looga dhawaaqay Bariga Africa
April 8 (Radio Baidoa)—Urur isku magacaabay Jabhada Bariga Africa ayaa sheegay in uu taageersan yahay oo uu ku biirey ururka IS uuna ka soo horjeedo ururka Alshabaab oo maamula deegaano ka mid ah dalka Soomaaliya.
Ururkan oo aan la ogeyn halka uu xarun ku leeyahay ayaa cambaareyay ururka Alshabaab oo gacan saar la leh ururka Alqaacida. Bayaan uu soo saaray ururkan oo aan ka soo xiganay wargeyska Independent ayuu ku sheegay in kooxdan ay tahay mid ka soo horjeeda ururka Alshabaab.
“Annagoo ah Jahba East Africa waxaan kula talinaynaa dhammaan dadka ku nool Bariga Afrika inay ka tagaan Alshabaab iyo ururada taageera sida Al-Muhajiroun, Al-Hijra iyo Ansar Islam,” lagu yiri bayaanka.
Kooxdan ayaa ku tilmaantay ururka Alshabaab iyo kooxaha taageera inaysan fahmin waajibaadka ah in lagu biiro Khaliifada islaamka.
“Waxaan u sheegeynaa mujaahidiinta Bariga Africa in Alshabaab uu noqday mid maskaxiyan iyo jir ahaanba xabsi ku jira.
“In beeco lala galo Khalif Abu Bakr al-Baghdadi waxa ay u tahay xoriyad mujaahidiinta Bariga Afrika waana fursad ah in la qaado jihaad sida ay qabto Sunnada laguna qaadayo cadowyada Allah.”
Afhayeen u hadlay kooxdan ayaa sheegay in kooxdu ay tahay mid dhowaan la aasaasay ayna ka kooban tahay maleeshiyaad ka dagaalamaya dalka Soomaaliya kuwaasoo ka soo kala jeeda dalalka Kenya, Tanzanian iyo Uganda.
Afhayeenka ayaa sheegay in maleeshiyaad loo xirey kadib markii ay sheegeen inay taabacsan yihiin ururka IS, isagoo intaa ku daray in bayaanka ay soo saareen uu yahay mid wakiil ka ah dhammaan dagaalyahanada ka soo jeeda Bariga Africa ee ka mid ah ururka Alshabaab iyo weliba kuwa kale ee raadinaya in ay Bariga Afrika ka bilaabaan dagaalo jihaad doon ah.
Waxaa jiray warar la isla dhex marayay oo ahaa in khilaaf gudaha ah uu u dhexeeyo taageerayaasha ururka IS iyo kuwa Al-Qacida ee ku jira ururka Alshabaab.
Hase yeeshee ururka Alshabaab ayaa hore u shaaciyay in aysan ogolaanayn in urur kale lagu biiro waxayna u digeen dadka doonaya in ay ku biiraan ururka IS.
Si kasta ha ahaatee lama oga kooxdan maanta shaacisay ku biirista IS halka ay ku sugan yihiin,lamana oga sidoo kale cidda hogaaminaysa oo u ah madax.